All news and updates about tele-density | Techzim
Homepage » Tag Archives: tele-density
Posts Tagged: "tele-density"
Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe (POTRAZ), has released the December 2012 (4th quarter) mobile phone and fixed telephone subscribers statistics. According to statistics that we received from the...
Zimbabwe now has about 4.5 million internet subscribers according to local telecoms regulatory authority POTRAZ. The new internet penetration figure was published today in the state owned Sunday Mail weekly...
17 Feb 2013	 4 Comments
Zimbabwe’s telecommunications regulator, POTRAZ, has released the June 2012 (2nd quarter) mobile phone and fixed line subscribers statistics. The stats, which were published in the state owned daily, The Herald,...
25 Sep 2012	 4 Comments
Four days ago, we posted the latest Zimbabwe mobile and fixed line subscriber statistics we got from the country’s telecoms regulator POTRAZ. The March 2012 stats show that Telecel, now...
31 May 2012	 1 Comment
Zimbabwe’s tele-density rose to 74.7% as 2011 came to a close. Mobile phone subscriber statistics we received from the Post and Regulatory Authority of Zimbabwe (POTRAZ) recently show that all...
11 Jan 2012	 15 Comments
Last week, we had an opportunity to visit POTRAZ, the country’s telecommunications regulator. There we got some stats of Zimbabwe’s telecommunications as at September 2010 and we thought we would...
28 Feb 2011	 4 Comments